Gumiguru 5, 2017 pa 1:05 pm
Zvikuru kuva kusunungurwa itsva!!
Gumiguru 6, 2017 pa 1:36 pm
Ndinotenda zvikuru basa renyu.
Gumiguru 7, 2017 pa 1:13 pm
Edit rokushandura kwete kushanda nokuti ini 🙁
Kana Ndinoita Edit shanduro I tinya dzipupurire shanduro asi hapana chinoitika…
Chii chandingaita ?
Gumiguru 8, 2017 pa 12:58 ndiri
Ndichaita mashoko kubva FAQ yedu:
Ini handigoni kuona rokushandura inowanikwa pashure vachisundira mifananidzo iri pepeta papeji
Izvi Ungangove yakakonzerwa jQueryUI kunetsana, Tapota bvunza kuti hapana mumwe shanduro jQueryUI chinobatanidzwa maererano dingindira rako kana mumwe plugin,
Ungadawo edza kushandisa jQueryUI kudarika waenda parameter (1.8.24 ndiyo nhamba akanaka)
Ndira 14, 2018 pa 11:18 pm
Sei unogona yokugadziridza parameter kudarika jQueryUI?
Chikumi 16, 2018 pa 11:58 ndiri
parameter ichi hazvingashandurwi iri yemhando Tab, kazhinji kuti 1.8.24 zvinova zvinowanzoita kushanda
Mbudzi 7, 2017 pa 8:33 pm
Ndizvo Version php7 enderana?
Mbudzi 9, 2017 pa 6:45 pm
Kurume 3, 2018 pa 12:34 pm
zviri kushanda pasi PHP 5.6?
Chikumi 16, 2018 pa 11:52 ndiri
Yeison Gomez anoti
Mbudzi 20, 2017 pa 6:00 ndiri
Mhoro! Ndinokutendai nokoko plugin ichi chikuru.
Kana Ndinoedza aongorore shanduro handigoni kuona of Google kana Bing kuvake.
Zvandiri kuita zvakaipa?
Chikumi 16, 2018 pa 1:14 pm
Kana uchiona Tabs asi kwete kuzvidhori, ichi ingava nokuda adblocking. Kana musingadaro chingaitika kana constants.php kwakashanduka mumutauro asiri akatsigira.
Gino Cote anoti
Zvita 27, 2017 pa 11:39 pm
Hi transposh kuputsa ajax kuwedzera engoro bhatani musi Woocommerce.
handina 100% chokwadi asi ndine kukanganisa vanoratidzika kuvhara ajax runhare.
Zvita 27, 2017 pa 11:47 pm
Mhoro, vachizvitakudza transposh kuti footer aigadzire.
Ndira 12, 2018 pa 11:15 ndiri
izvi nekusimba. Ndinoshandisa plugin ichi. Ndichaparidza shamwari dzangu pamusoro Facebook
Chikumi 16, 2018 pa 12:03 pm
Ndira 12, 2018 pa 1:25 pm
Pamwe udza WordPress pfupi ichangobva shanduro.
The Plugin “Transposh WordPress Translation” sokuti kusiyiwa (weekly 27 Zvita 2014, akaedzwa WP 4.1.21).
Ndine Version 0.9.9.2 akagadzawo
Chikumi 16, 2018 pa 11:59 ndiri
Muri Zvemazvirokwazvo ichokwadi, wakaiswa ichi ikozvino.
Ndira 20, 2018 pa 7:45 ndiri
plugin Your zviri zvechokwadi naka, yakanakisisa ndikawana, asi handigoni kunzwisisa chaizvo zvaunoda.
In Donate peji : http://transposh.org/faq/donate/
munoti musingazopandukiri mari asi kana hatidi Logo rako Widget munoti rauchagara :
“tsiva upto 5% ezvokushambadzira yako nzvimbo uye chavanopinda Links pamwe yayo zvivabatsire yekubvuma”
Tingaratidza kudzora kuti ?
Uri Hacker ?
Ndofunga, kana muri vanhu vakatendeka, yakanakisisa nzira iri kuti plugin yako OK kuti WordPress.org, zvino tinogona kuvimba nemi, uye kubvuma dhonesheni kana kukumbira mari yakawanda nezvechisarudzo.
Uye iwe uchava nhamba imwe shanduro plugin!
Chikumi 16, 2018 pa 11:57 ndiri
Handidi mari yako, uyewo unogona I Hack yako nzvimbo ine bumbiro iri zvachose zvinoonekwa kwamuri. Kana usina chokwadi kutendeseka kwangu, ndapota kushandisa imwe mhinduro. I ngozi kunogona kufunga musingadi rizowedzerwa iyi plugin budiriro, kana vakanga iwe vachironga uchiita izvi.
Kukadzi 7, 2018 pa 10:37 pm
Ndinokutendai nokuti plugin ichi ! Anotarira vaizotibata pamusoro mifananidzo uye mavhidhiyo.
By parutivi rwangu, haina kushanda.
Ndiri chaizvoizvo kuedza naro pabvunzo Server. WordPress reseted. matambudziko Same :
– Chekutanga, mapeji hadzina kushandurwa, kunyange zvazvo kuronga kuti kunyora ipapo kubudisa zvakare. Ndinoona mberi nomuzariro asi hapana chinoitika. Hapana rinoshandurwa pamberi magumo apo rinoti 20 mapeji kushandurwa muna dashboard.
– ndokubva, pepeta mifananidzo haana kuratidza apo ini tick ari pepeta bhokisi. Ndakaedza pano pa-website yako uye riri kushanda, dambudziko hakufaniri kubva Browser yangu. Asi handina kuwana nayo. No chero mifananidzo.
* Wordpress twentyfifteen dingindira
* suiteplugins – mazhinji minda buddypress xprofile
* buddypress nhengo chete
pfungwa chero pane zviri ichivharira transposh yangu ?
Chikumi 16, 2018 pa 1:13 pm
Yedzai shanduro itsva. Ngatizive yaumire.
Waseem Khan anoti
Kukadzi 15, 2018 pa 7:38 ndiri
Ndakaita zvose shanduro kubva pamberi-kumagumo nzvimbo yangu Arabic. Pari yangu nzvimbo chete Chirungu yandinofamba rinoshandurwa wayo wechipiri shanduro sezvo Arabic vachishandisa Transposh.
Zvino kubatana kwakafanana ichi:
Normal Chirungu VERSION: http://www.example.com
Ndinoda kuti ” /ne ” shanduro sezvo default. Saka ndakaita Arabic sezvo Default Mumitauro Chikamu Transposh asi kubva kumberi-mugumo, ayo kundipa Chirungu Version, kwete Arabic.
Zvino zvandakaita, ndechokuti, Ndakaita redirection pamusoro soumambo wangu “/ne”. Izvi zvinoshanda akakwana asi apo Achivhura dzakasiyana zvikamu yangu nzvimbo kubva kumberi-mugumo, dzimwe nguva kubatana rwoga anochinja kudzokera Chirungu shanduro.
Ndiri kushamisika ikozvino, unogona ndapota pfungwa kwandiri zvandinenge zviruva kuti chinangwa ichi kuitira kuti chete rakashandurwa shanduro yangu rinoratidza ari mberi-mugumo, Handidi Chirungu Version zvachose.
Chikumi 16, 2018 pa 1:12 pm
mutauro Default hakusi mutauro nzvimbo uchapiwa kwakaratidzwa pagungano, ndiwo mutauro kuti vazhinji wako nzvimbo tigutsikane rakanyorwa. Kuchinja uku hakusi parizvino zvakakurumbira tichitsigira.
Kukadzi 28, 2018 pa 2:28 ndiri
zvisinei – Whz zviri pachena? Pane Yakavanzwa Scripts? Kungobvunzawo?
Chikumi 16, 2018 pa 11:54 ndiri
Hapana chakavanzika, unogona kuona ose anotaura trac.transposh.org
Abu Zafor anoti
Kurume 26, 2018 pa 7:27 pm
Ndingaita sei kuti dzakananga romukova rutsigiro chaicho mutauro mumwe kupfuura mutauro zvose vakasarudzwa muna Transposh Language.
Uyewo zvinoita kubvisa mutauro chaiwo kubva chete mumhanyi chete, kwete nzvimbo yose?
Chikumi 16, 2018 pa 11:53 ndiri
Panguva iyi nguva, hakuna zvakadaro chinoratidza
Furniture zvitoro anoti
Kubvumbi 13, 2018 pa 11:07 ndiri
Anoshanda PHP 5.3?
Chivabvu 16, 2018 pa 6:29 ndiri
Pandaiva kushandura namagwatidziro yangu Transposh, migumisiro vakasiyana Vashanduri Google Translate (Ndinoshandisa shandurudzo yegoogle injini). Izvo dzimwe nguva zvinoguma shanduro zvakaipa. Nei izvi zvichiitika? Unogona ndapota rubatsiro?
Transposh anotumira zvikamu zviduku kuna Google, saka kana uchida zvabuda nani unogona kushandura parsing anobata yepamusoro Tab. Asi izvi zvinoita shanduro shoma tefa